Wadnahaaga halis ayuu ku jiraa haddii arrintan aadan ku sameen karin
Home Aragti-doon Wadnahaaga halis ayuu ku jiraa haddii arrintan aadan ku sameen karin 90...
Wadnahaaga halis ayuu ku jiraa haddii arrintan aadan ku sameen karin 90 il biriqsi
Wadna xanuunka waa cudur dilaa ah, waxaa muhiim ah in aad mar walba la socotid xaalada caafimaad ee wadnahaaga, ogoow wadna qabadka (Heart Attack) da' walba ayuu ku dhici karaa
Inta ay da’deenu kordhayso, waxaa si la mid ah u kordha muhiimada ay leedahay in aan fiiro gaar ah siino caafimaadka wadnaheena.
Xarunta baaritaanka iyo ka hortaga cudurada ee Maraykanka ayaa sheegtay in xanuunka wadnaha uu ku dhici karo da’ walba, balse khatarta ayaa mar walba sare u kacda inta ay da’da qofka kor u socoto.
Laakiin sidee ku ogaan kartaa in halis caafimaad uu wadnahaaga ku suganyahay haddii qalabka lagu baaraa laga helo isbitaalada keliya ayna adagtahay in aad guriga ku haysatid sababo la xiriira qiimaha qalabkaas oo qaali ah.
Haka wel welin, waxaan halkaan kuugu soo gudbinaynaa hal qaab ama tijaabo oo aad meel walba ama gurigaagaba ku samayn kartid, taas oo kuu sahli doonto in aad wax fikrad ah ka heshid xaalada caafimaad ee wadnahaaga ku sugan yahay.
Qof walba oo wadnihiisu caafimaad qabo waa in uu kori koraa jaraan jar laba dabaq gaaraysa muddo dhan 45 il biriqsi gudahood.
Jaran jarooyin hal qayb ah (One flight of stairs). Waxaa lagaa rabaa in aad kortid afar qayb oo laba dabaq gaarta
Cilmi baaris lagu soo bandhigay shir wayne bishii Diseember ee 2020-ka oo ay isugu yimaadeen khubarada ka shaqeeya caafimaadka wadnaha ee reer Yurub ayaa sheegtay si aad u baartid ama aad u ogaatid caafimaadka wadnahaaga waxa keliya ee aad u baahan tahay waa saacad (stopwatch) iyo jaraan jar gaaraysa laba dabaq oo ka kooban 4 qayb.
165 qofood oo isugu jira da’ kala duwan, dad xanuuno dhinaca wadnaha qabay, iyo kuwa caafimaad qabay ayaa waxaa la ogaaday in qofka wadnihiisu sida saxda ah oksijiinka u qaato ay 45 il biriqsi ku qaadato in uu koro jaran jaran afar qayb ah oo leh ilaa 60 tallaabo jaranjar (Steps), waxaa sidoo kale la aqbali karaa ilaa 90 ilbiriqsi in ay qofka ku qaadato isaga oo aanan ordaynin.
Diktoor Jesus Poteiro oo sameeyay cilmi baaristan kana howl gala Isbitaalka Jaamacada Canura ee wadanka Spain ayaa wuxuu yiri haddii Afar qayb (Four flights) oo jaranjar aad ku kori weysid muddo dhan 90 il biriqsi ama hal daqiiqo iyo bar, waxaad u tagtaa takhtarka wadnaha si xaalka caafimaad ee wadnahaaga loo ogaado.
Cilmi baaris kale ay 2016-kii samaysay hay’ada American Heart Association ayaa sheegtay boqolkii 45 % nooca cudurka wadno xanuunka ama wadna qabadka (Heart Attack) dadka ku dhaco uu yahay mid aamusan (Silent) oo micnaheedu tahay in uusan wax calaamad ah horey u muujinin balse si kadis ah uu u qabta ama ugu soo booda dadka la xanuunsada.
Arrintan ayaa ah in uu cudurkan halis yahay, halistiisuna ay sii kororto mar walba uusan muujinin calaamadaha wadna xanuunka, kuwaas oo kuu sahli lahaa in aad u tagtid takhtar si wax looga qabto.
Sidaa daraadeed waxaad ogaataa in ay muhiim tahay la socodka xaalada caafimaad ee wadnahaaga maadaama wadno qabadka uu kugu dhici karo adiga oon filanaynin.
Dowlada maraykan ayaa kujirta wadamada aduunka ugu horreeya caafimadka iyo cilmi baarista ku aadan cudurada wadnaha sidaa darteed, maanfur waxay idiin soo gudbinaysaa macluumaad walba oo anfac u leh dadka Soomaaliyeed.
Taladan ayaa waxaan u aragnaa in ay si fiican u anfaci karto shacabka Soomaaliyeed maadaama aysan haysanin takhaatiir badan ama qalab si joogto ah loogu ogaado xaalada caafimaad ee wadnaha.
Taladan ayaa ah mid aad si fudud u samayn kartid, taas oo kuu sahlaysa in aad ciyoow ogaatid xaalada caafimaad ee wadnahaaga ku suganyahay.
Waxaad raadsataa saacada leh (Dhaqaaq iyo Joogsi – Stopwatch), waxaad fuushaa dabaq ugu yaraan gaaraya laba, ha ordin marka aad fuulayso, tartiib u fuul ama u kor sida caadiga ah ee aad awalba u kori jirtay.
Haddii ay kugu qaadato in ka badan hal daqiiqo iyo bar ama 90 il biriqsi, waxaad ogaataa in xaalada wadnahaaga ay u baahan tahay la tashi takhtar ama fiiro gaar ah, waxaadna si deg deg ah u raadsataa takhtarka wadnaha ee meesha aad dagan tahay ka howl gala.
Previous article7 dhacdo oo muran dhaliyay oo ku saabsanaa jilayaashii 1990-meeyadii
Next articleMeghan oo codsi u gudbisay qoyska boqortooyada
Waa maxay NFT? Farshaxanka Internetka oo aad looga taajiray (Layaabkii dunida)
Soomaalida iyo bixinta naanaysta xun – Adiga naaneystaada maxay tahay?
Afar qaab oo lagu ogaado raali gelinta aan daacada ahayn